पेय बोतल निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन पेय बोतल कारखाना
शीर्ष बिक्री गिलास दुधको बोतलहरू
हाम्रो समृद्ध कार्य अनुभव र विचारशील समाधानहरूको साथ, अब हामी एक विश्वासयोग्य आपूर्तिकर्ता मानिन्छ। Ml 350० मिलीलीटर खाली मेसन जारको लागि, स्पष्ट गिलास दुधको बोतलहरू हाम्रो तातो बिक्री उत्पाद हो, पर्याप्त सामान स्रोत छ र दर पनि हाम्रो फाइदा हो। हाम्रो व्यापारको बारे सोधपुछ गर्न स्वागत छ। नमूना: प्रदान गरिएको OEM / ODM: स्वीकार्य क्याप रंग: अनुकूलित रंग आकार: फ्ल्याट, गोलाकार वा अनुकूलित गुणवत्ता आश्वासन: गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न स्वचालित निरीक्षण
ग्लास मेसन कप ग्लास बोतल परालको साथ
हामी ग्राहक सन्दर्भको लागि निःशुल्क नमूना आपूर्ति गर्दछौं, हाम्रो समृद्ध उत्पादन अनुभव, उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरू र समाधानहरू, र उत्तम बिक्री-पछि सेवाको साथ, जुमले राम्रो प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको छ र निर्माण श्रृंखलामा विशेष प्रख्यात उद्यम मध्ये एक भएको छ। हामी ईमानदारीले आशा गर्छौं तपाईं संग व्यापार सम्बन्ध स्थापित र आपसी लाभ को लागी। हामीले प्रशोधन लागत घटाए, लागतहरू थप व्यावहारिक छन्, नयाँ र पुरानो ग्राहकहरूको समर्थन र पुष्टि जितेका छौं। हाम्रो अवधारणा हाम्रो सबैभन्दा ईमानदार सेवा, र सही उत्पादन को प्रस्ताव को साथ ग्राहकहरु लाई मद्दत गर्न को लागी हो।
स्विंग शीर्ष ढक्कन पेयको बोतल जुसको बोतल
JUMP २० बर्षको अनुभवको साथ एक पेशेवर गिलास वेयर निर्माता हो। विभिन्न गिलास बोतलहरू र गिलास जारहरूको उत्पादनमा विशेषज्ञता। 50000 m² को क्षेत्र कवर गर्दछ र 500 भन्दा बढी कर्मचारी गणना गर्दछ, उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 800 मिलियन पीसी छ। उन्नत प्राविधिक सहयोग जम्पको साथ निर्यात गिलासको बोतलहरू र गिलास जारहरू यूरोप ˴ संयुक्त राज्य अमेरिका ˴ दक्षिण अमेरिका ˴ दक्षिण अफ्रिका out दक्षिणपूर्व एशिया bott रूस ˴ मध्य एशिया र मध्य पूर्व बजारमा छन्, जहाँ राम्रो प्रतिष्ठा छ। म्यानमार ˴ फिलिपिन्स ˴ रसिया ˴ उज्बेकिस्तानमा पनि यसको शाखाहरू छन्। व्यावसायिक डिजाइन टीम ग्राहकहरु को लागी व्यक्तित्व सेवा प्रदान गर्दछ। सुरक्षित ˴ व्यावसायिक ˴ मानकीकृत ˴ कुशल एक स्टप ग्लास प्याकेजिंग सेवाहरू ग्राहकहरूको लागि प्रदान गर्न प्रतिबद्ध।
पराल गिलासको बोतल परालको साथ
हामीले प्रशोधन लागत घटाए, लागतहरू थप व्यावहारिक छन्, नयाँ र पुरानो ग्राहकहरूको समर्थन र पुष्टि जितेका छौं। हाम्रो अवधारणा हाम्रो सबैभन्दा ईमानदार सेवा, र सही उत्पादन को प्रस्ताव को साथ ग्राहकहरु लाई मद्दत गर्न को लागी हो। कोरको रूपमा टेक्नोलोजीसँग, बजारको विविध आवश्यकताहरू अनुसार उच्च-गुणको सामानहरू विकास र उत्पादन गर्नुहोस्। यो अवधारणाको साथ, उच्च वर्ड मानहरू र निरन्तर समाधानहरू सुधार गर्ने उत्पादहरूको विकास गर्न जारी राख्नेछ, र ग्राहकलाई उत्तम समाधान र सेवाहरूको साथ दिनेछ! हामीसँग उद्योगहरूमा शीर्ष ईन्जिनियर टोली र अनुसन्धानमा एक कुशल टोली छ। अझ बढी, हामीसँग कार्यशालामा २ 26 भन्दा बढी उत्पादन लाइनहरू छन्, त्यसैले हामी विभिन्न ग्राहकहरूको बिभिन्न सोधपुछ पूरा गर्न सक्दछौं। हाम्रो समाधानबाट अधिक जानकारी जाँच गर्नका लागि स्वागत छ र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
पराल संग रस गिलास बोतल
सतह ह्यान्डलिंग: डिकेल र लोगो पेयको लागि हामी सामान्यतया सिद्धान्तमा रहन्छौं "गुणवत्ता धेरै पहिले, प्रतिष्ठित सर्वोच्च"। हामी हाम्रा दुकानदारहरूलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यका उच्च गुणस्तरको समाधानहरू, शीघ्र वितरण र ग्राहकहरूको लागि विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो उत्पादनहरू गिलास पेय बोतल, सबै प्रकारका गिलास जारहरू, वाइन बोतल, गिलास कचौरा, इत्यादि समावेश गर्दछ। यसबाहेक, ग्राहक पूर्ति हाम्रो अनन्त पीछा हो। हामीसँग उद्योगहरूमा शीर्ष ईन्जिनियर टोली र अनुसन्धानमा एक कुशल टोली छ। अझ बढी, हामीसँग कार्यशालामा २ 26 भन्दा बढी उत्पादन लाइनहरू छन्, त्यसैले हामी विभिन्न ग्राहकहरूको बिभिन्न सोधपुछ पूरा गर्न सक्दछौं। हाम्रो समाधानबाट अधिक जानकारी जाँच गर्नका लागि स्वागत छ र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
स्पिरिट बोतल वाइन बोतल बीयर बोतल ग्लास जार र सफ्ट ड्रिंक बोतल ˴ गिलास डिस्पेंसर ˴ मेसन जार हाम्रो लोकप्रिय उत्पादन हो। सबै उत्पादनहरू एफडीए, LFGB र DGCCRF प्रमाणपत्र परीक्षा पास गर्न सक्दछन्। हरियो, वातावरण संरक्षण र मानव को स्वस्थ जीवन सधैं हाम्रो विकास को दिशा भएको छ। व्यावसायिक डिजाइन टीम प्रिन्टिंग ˴ प्याकिंग ˴ उत्पादन डिजाइनमा आवश्यकता पूरा गर्न सक्दछ। हाम्रो सिद्धान्त हो: एउटा स्टेशन अपरेसन, तपाईंको आवश्यकता पूरा गर्दै, समाधानहरू प्रदान गर्दै र जीत-प्राप्त।
परालको साथ गिलासको बोतल पिउँदै
JUMP एक समूह कम्पनी हो जुन २० बर्षको अनुभव उत्पादनमा विशेषज्ञता दिन्छ विभिन्न मध्यम र उच्च-ग्रेड दैनिक प्रयोग गिलास भाँडो र गिलासको बोतलमा। तटीय पर्यटन प्रान्तमा अवस्थित - शानडाong, नयाँ युरेसियन कन्टिनेन्टल ब्रिजको पूर्व टाउकोको रूपमा चीनको क्विडडाउ पोर्टमा सब भन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह रहेको छ, JUMP को एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि एक राम्रो प्राकृतिक अवस्था सिर्जना गर्‍यो।
पेय पेय कांचको बोतल परालको साथ
पेच बोतल स्क्रू टोपी संग
लोगो: स्वीकार्य ग्राहकको लोगो र Color्ग: सफा वा अनुकूलित भूतल ह्याण्डलिंग ： स्क्रिन प्रिन्टिंग ast भुनाउने ˴ प्रिन्टिंग ˴ स्यान्डब्लास्टि˴ ˴ नक्काशी ˴ इलेक्ट्रोप्लेटि and र रंग स्प्रेing्ग डिकेल ˴ डेकल, आदि। औद्योगिक प्रयोग: पेय, फल, रस, पानी, दूध आदि आधार सामग्री: गिलास नमूना: प्रदान गरिएको OEM / ODM: स्वीकार्य टोपी रंग: अनुकूलित र Color आकार: फ्ल्याट, गोलाकार वा अनुकूलित प्रमाणीकरण: FDA / 26863-1 परीक्षण रिपोर्ट / आईएसओ / SGS प्याकिंग: प्यालेट वा गत्ते का डिब्बा उत्पत्ति स्थान: शेन्डोंग, चीन गुणवत्ता आश्वासन: स्वचालित गुणस्तर सुनिश्चित गर्न निरीक्षण उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष million०० मिलियन पीसी छ डिलिभरी समय यदि within दिन भित्र भण्डारमा उत्पादन छ भने, एक महिना भित्र वा अन्य सामान्यतया डेलिभरी चाहिन्छ भने
लोकप्रिय डिजाइन पेय पदार्थ बोतल को रस बोतल
हामीसँग उद्योगहरूमा शीर्ष ईन्जिनियर टोली र अनुसन्धानमा एक कुशल टोली छ। अझ बढी, हामीसँग कार्यशालामा २ 26 भन्दा बढी उत्पादन लाइनहरू छन्, त्यसैले हामी विभिन्न ग्राहकहरूको बिभिन्न सोधपुछ पूरा गर्न सक्दछौं। हाम्रो समाधानबाट अधिक जानकारी जाँच गर्नका लागि स्वागत छ र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी ग्राहक सन्दर्भको लागि निःशुल्क नमूना आपूर्ति गर्दछौं, हाम्रो समृद्ध उत्पादन अनुभव, उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरू र समाधानहरू, र उत्तम बिक्री-पछि सेवाको साथ, जुमले राम्रो प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको छ र निर्माण श्रृंखलामा विशेष प्रख्यात उद्यम मध्ये एक भएको छ। हामी ईमानदारीले आशा गर्छौं तपाईं संग व्यापार सम्बन्ध स्थापित र आपसी लाभ को लागी।
कारखाना बेच्ने एयरटाइट गिलास जुसीको बोतल
कोरको रूपमा टेक्नोलोजीसँग, बजारको विविध आवश्यकताहरू अनुसार उच्च-गुणको सामानहरू विकास र उत्पादन गर्नुहोस्। यो अवधारणाको साथ, उच्च वर्ड मानहरू र निरन्तर समाधानहरू सुधार गर्ने उत्पादहरूको विकास गर्न जारी राख्नेछ, र ग्राहकलाई उत्तम समाधान र सेवाहरूको साथ दिनेछ! हामीसँग उद्योगहरूमा शीर्ष ईन्जिनियर टोली र अनुसन्धानमा एक कुशल टोली छ। अझ बढी, हामीसँग कार्यशालामा २ 26 भन्दा बढी उत्पादन लाइनहरू छन्, त्यसैले हामी विभिन्न ग्राहकहरूको बिभिन्न सोधपुछ पूरा गर्न सक्दछौं। हाम्रो समाधानबाट अधिक जानकारी जाँच गर्नका लागि स्वागत छ र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
जैतुन तेल र सिरका ग्लास क्रुएट, वर्ग जैतुनको तेल बोतल, जैतुनको तेल बोतल, 250 मिलीलीटर जैतुन तेल बोतल, जैतुन तेलको लागि बोतल, जैतुनको तेल भण्डारण जार,